AeroLeads: Ku Aqoonso Cinwaanada E-mayl ee Fursadda leh Plugin-ka Chrome | Martech Zone
Iyadoo aan loo eegin sida ay shabakadu u ballaaran tahay, waxay had iyo jeer umuuqataa inaadan waligaa laheyn xiriir sax ah. Gaar ahaan markaad la shaqeyneyso ururo aad u waaweyn. Macluumaadka lala xiriiro badanaa waa waqtigooda - gaar ahaan maaddaama ganacsiyada ay leex leexasho shaqaale oo muhiim ah.
Awoodda aad ku eegi karto macluumaadka xiriirka waqtiga-dhabta ah oo laga helayo ilo adag ayaa muhiim u ah dadaalkaaga saadaalinta dibedda. Aeroleads waa adeeg leh lasocodka Chrome Plugin kaas oo awood u siinaya kooxdaada iibka inay sidaa sameeyaan.
AeroLeads waxay u ogolaaneysaa xirfadleyda iibka ee banaanka inay ka raadsadaan xiriiro shirkad ama adeegsadayaasheeda koombiyuutarka ee loo yaqaan 'Chrome plugin' - ku qabsato macluumaadka xiriirkooda ee ku dhex jira keydkooda xog uruurinta ee la xiriira astaanta bulshada ee aad fiirineyso.
Isticmaalka Aeroleads Chrome Extension waa fududahay:
ku rakib ah Kordhinta Chrome, dhaqaaji, oo ka raadi AeroLeads, Google, LinkedIn, Crunchbase, AngelList, iwm.
Xulo Filashooyinka La Xiriira oo ku wareeji AeroLeads liiska rajada.
AeroLeads ayaa soo doonan doonta dhammaan faahfaahinta ganacsiga ama qofka oo ay ku jiraan Email, Magaca, Lambarka taleefanka, iyo astaamaha bulshada.
Liiska xitaa waad u diri kartaa CRM dibadeed haddii aad jeceshahay inaad halkaas ku dhisto liistada rajada. Macluumaadka xiriirka waxaa lagu bixiyaa qiyaastii $ 0.50 diiwaanka. Waxaad ku tijaabin kartaa fiilada 10 dhibco oo bilaash ah.
Isdhexgalka Aeroleads Lead
Aeroleads waxay soosaartay isku-dhafnaan si loogu riixo macluumaadka xiriirka si toos ah koontadaada ama qalab kale, oo ay ku jiraan Mailchimp, Salesforce, Insightly, Pipedrive, Zapier, Zoho, Hubspot, iyo FreshSales.
Shaacinta: Waan iska diiwaan gelinay AeroLeads oo waxay adeegsanayaan xiriiriyeheena xiriirka ku leh badhanka kore.
Tags: aeroleadsAPIiibso xogta xiriirkaiibso diiwaanka rajadakordhinta chromeplugin chromeliiska xiriiradahel macluumaadka xiriirkaFreshsaleshel macluumaadka xiriirkahubsashoSi macquul ahliiska apimailchimpbannaankaPipedriveliiska rajadaiibinzapierZoho